China ZK andian-dahatsoratra mihetsiketsika efijery manamboatra sy orinasa | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Fampidirana ny efijery mihetsiketsika Linear
Fitsipika miasa ny efijery mihetsiketsika Linear
Ny môtô dia niparitaka nankany amin'ny vibrator tamin'ny fehikibo V, satria ny fihodinan'ny tsorakazo eccentric dia miteraka hovitrovitra, mahatonga ny écran écran hanao fihetsiketsehana fanaraha-maso boribory, noho izany dia mihodina sy mihetsiketsika eo ambonin'ny efijery. Ny lehibe eo ambonin'ny efijery, ny haben'ny fitaovana kely noho ny mason-tsarimihetsika dia hianjera ao ambanin'ny efijery hahatratra ny tanjon'ny fisavana.
1. Fiantohana herintaona.
2. Fitsapana santionany.
3. ny teknisiana anay dia afaka mamolavola ny tetikasanao mifototra amin'ny fampahalalanao toy ny tabilao mikoriana.
4. injeniera misy amin'ny fametrahana sy fiofanana an-dranomasina.
5. aorian'ny fivarotana asa fanompoana, toy izany koa ny ampahany voatokana.
F: alohan'ny famotopotorana dia mila mahazo fampahalalana vitsivitsy isika, amin'izay dia afaka mahafantatra ny masinina tadiavinao aho.
A: 1. Inona no akora ilaina amin'ny tsipika famokarana anao?
2. Inona no fahaiza-manao takinao?
3. Inona ny haben'ny fidirana ambony indrindra amin'ny akora?
4. Inona ny haben'ny vokatra sy ny fampiharana amin'ny vokatra farany?
F: mpanamboatra efijery mihetsiketsika Linear ve ianao?
A: Eny, mpanamboatra efijery mihetsiketsika Linear izahay ary manana ny orinasanay manokana, any Shicheng, Ganzhou, Jiangxi.
F: Inona ny fiantohana an'ny efijery mihetsiketsika Linear?
A: 1 taona.
F: hanampy ve ianao hametraka milina efijery mihetsiketsika Linear?
A: Raha mila izany ianao dia hanana ny teknisianinay hanampy anao amin'ny fametrahana azy
Previous: ZDS series elliptical mitovy hatevin'ny efijery
Manaraka: ZSG Linear vibrant efijery